Kurapa - Kudzidzisa Kuziva
Zvishandiso uye zvinyorwa zvekurapwa kwehurema hwekudzidza
Anobatsira matipi e "jimunasitikisi" epfungwa: Kufungisisa
Kutsvaga pawebhu pane zviwanikwa zvakawanda (zvemahara uye kwete) izvo zvinogona kushandiswa mumunda weiyo neurocognitive kugadzirisa uye kudzidzisa kwemabasa epamusoro. Chimwe cheizvi [...]
Computerized aphasia pamwe nekugadzirisa. Iko kusanganiswa kwekuziva kwekudzidzira uye kudzidzisa mutauro
Kwekusiya simba mune dyslexia. Kuvandudza kuverenga pasina kuverenga
Kuziva tele-kugadzirisa mushure me cranio-encephalic trauma
Therapy kurapa, coronavirus uye tele-kugadzirisa: zvinyorwa zvinobatsira
Pane ino peji tinounganidza zvinyorwa zvine chekuita neCoronavirus zvine chekuita nenzvimbo dzekurapa kwekutaura kufarira. Clinical chiitiko FLI uye CDA Speech Therapists - Nongedzo uye [...]
Kubudirira kwezvepfungwa kuburikidza ne internet